Vidiyo nke atọ nke na-ekpuchi iPhone ma ọ bụ iPad | Akụkọ akụrụngwa
Vidio nke abụọ nke gbachiri iPhones ma ọ bụ iPads
Anyị na-eche ihu vidiyo nke yiri ka ọ nwere ike igbochi iPhone na iPad mgbe ị lechara ya na ngwaọrụ ahụ, na-achọ ịmalitegharị ha iji nwee ike ịgbalite ha ọzọ. Eziokwu bụ na n'onwe m na m chetara na ọ bụ oge mbụ na ihe dị ka nke a na-egosi na iPhone ma ọ bụ ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ iOS. Anyị doro anya na nke a bụ nwa oge n'ihi na anyị ahụla ozi ọma na mgbasa ozi dị iche iche ma anyị maara na a ga-edozi ya site na ịmalitegharị ọnụ, mana mana Achọghị m itinye onwe m na akpụkpọ ụkwụ nke ndị ọrụ mbụ metụtara vidiyo.
Na mbu dọọ aka na ntị na anyị agaghị etinye vidiyo a na-ekwu okwu na weebụ maka ebumnuche doro anya, mana ọ gaghị esiri ike ịchọta ma ọ bụrụ na ịchọọ netwọk ahụ. N'aka nke ọzọ, igbachi ama ma ọ bụ iPad ịchọrọ Safari na ngwaọrụ nwere iOS, ya mere echegbula. ọ dịghị onye ga-emerụ ahụ site na ikiri vidiyo nke ọ bụrụ na anyị ahụ otú software a si arụ ọrụ:
Anyị agaghị ekwu okwu banyere eziokwu nke ihe a niile ebe ọ bụ na anyị agaghị anwale ya, mana o doro anya na ọ nwere ike ịbụ nsogbu nye ndị ọrụ ahụ na-amaghị etu esi bidogharịa iPhone ma ọ bụ iPad na-eji andlọ na Ike. mkpọchi. Ọ bụrụ na ha gafere gị vidiyo ma ọ bụ ihe ọ bụla ị na-egwu ya na ngwaọrụ gị naanị site na ịpị Home na Ike button n'otu oge maka sekọnd ole na ole ọ malitegharia ma dozie nsogbu ahụ. N'ihe banyere iPhone 7 ị ga-pịa bọtịnụ ike na bọtịnụ olu olu.
A na-emegharị ahụhụ ahụ na nsụgharị niile site na iOS 10 na iOS 5, ya mere kpachara anya na-eche na ọ naghị emetụta ngwaọrụ niile n'agbanyeghị afọ ole ha dị. Anyị chere na Apple na-arụ ọrụ na ya maka mmelite ngwanrọ na-esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Vidio nke abụọ nke gbachiri iPhones ma ọ bụ iPads
Ngwá agha ejikere na ọgụgụ isi ka edobere na United States
5 aghụghọ na-adọrọ mmasị iji nweta ọtụtụ n'ime Kindle gị